Nweta Google Websaịtị Gị
N'oge na-adịbeghị anya, m na-ebupụta ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ. Dika Address abuo toro ma oge m atugo, o meputara oke mmiri ozuzo nke echiche ohuru na oge efu iji mezuo, ya mere azutara m otutu ngalaba ma mejuputa micro-saiti aka ekpe na aka nri. N’ezie, enweghi m ndidi. Enwere m echiche na Mọnde, wulite ya na Tuesday, Achọrọ m ịzụ ahịa na Wednesday. Mana ọ nwere ike iwe ụbọchị ma ọ bụ izu tupu ngalaba ọhụrụ m gosipụtara na nyocha Google, ọbụlagodi mgbe m na-achọ aha ngalaba m.
Ya mere, amalitere m ịmịkọta usoro iji mee ka ududo bịa ngwa ngwa. Ọ bụrụ na SEO bụ alechemy, mgbe ahụ bụ nke m ụlọ-ime biya maka mee ngwangwa oge si igba egbe na ndeksi. Ọ bụ ihe dị mfe, ma pụtara irè. Offọdụ n'ime ihe ndị m mere na nso nso a emego wee pụta na nsonaazụ ọchụchọ n'okpuru awa 24. M na-agbaso usoro 8 ndị a dị mfe.
Debe SEO peeji nke mbu, ma ọ dịkarịa ala opekempe. N'eziokwu, nke a enweghị ihe ọ bụla gbasara ịmegharị, ma ọ bụrụ na ịmeghị nke mbụ, usoro 7 na-esote bụ ihe efu. Kpọmkwem, jide n'aka na akara aha gị kachasị mma. Gịnị mere nke a ji dị oke mkpa? Maka, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịnweta ududo na ibe gị ngwa ngwa, nke a apụtaghị na ha ga-alaghachi ngwa ngwa. Yabụ, ọ bụrụ na mbido mbụ gị nwere mkpado aha ederede edeghị ede, mgbe ahụ ị nwere ike ịrapara n'izu ole na ole sochirinụ site na iji ọdịnaya echekwara nke ọma na ndeksi Google. Jide n'aka na ihe ị na-agba ọsọ ka a hụ gị kwesịrị ka a hụ gị ka ọ dị maka izu ole na ole ka ị na-eche maka iri na-esote.
Wụnye Google Analytics. Mee nke a n’ihu saiti maka otu ihe kpatara ya: ọ na - ewepụta oge. Otu ụzọ ị nwere ike isi nyochaa ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ gị na Google Webmaster bụ site na nchịkọta edemede. Yabụ, chekwaa otu nzọụkwụ ma mee nke a na mbụ. Iji mee nke a, gaa www.google.com/analytics.
Nyefee saịtị saịtị XML na Google Webmaster Ngwaọrụ. You nwere ike iwunye nke ọ bụla n'ime ọtụtụ plugins WordPress iji mepụta saịtị saịtị a na-akpaghị aka, ma ọ bụ jiri aka mee ya. Nke a dị oke mkpa iji nweta ọnya nke ziri ezi na nke ọma, agbanyeghị ọtụtụ webmaster novice kwenyere na ọ bụ njedebe maka ịnyagharị. Ọ bụghị. Ọ bụrụ n ’ịkwụsị usoro a, dịka 99% nke webmasters ọhụụ na - eme, ị ga - echere izu ma ọ bụ ọnwa tupu Google agaa ebe ị na - egwu saịtị gị. Ihe na-eso ya ga-eme ka usoro ahụ dị ngwa. Iji mezue usoro a, gaa www.google.com/webmasters
Tinye URL na Profaịlụ LinkedIn gị. Mgbe ị na-edezi profaịlụ LinkedIn gị, ị nwere ikike ịgụnye weebụsaịtị 3 nke URL. Ọ bụrụ na i jirilarị atọ n'ime oghere ndị ahụ, oge eruola ịchụ àjà nwa oge. Họrọ otu n'ime URL ahụ iji wepu maka izu ole na ole sochirinụ ma dochie ya na URL na ebe nrụọrụ weebụ ị bipụtara ọhụrụ. Echegbula, ị nwere ike ịgbanwe nke a azụ mgbe e mesịrị. Tinye ndetu na kalịnda gị maka oge na-adịghị anya ka ụbọchị 14 gachara ịlaghachi na profaịlụ Njikọ gị ma weghachite ndepụta URL gị na ihe ị nweburu. N'ime ụbọchị iri na anọ ahụ, Google nwere ike ịchọta njikọ ọhụrụ ahụ wee soro na weebụsaịtị gị.
Tinye URL na profaịlụ Google gị. Google nwere ike ime nwayọ na ọnụọgụ nke njikọ ha kwere na profaịlụ gị. Mgbe ị banyere Google, site na ibe Google ọ bụla (gụnyere ibe obibi ha) ị nwere ike pịa Lee Profaịlụ na akuku aka nri elu, wee pịa Dezie profaịlụ. N'aka nri, ị kwesịrị ịchọta ngalaba akpọrọ "Njikọ". N'ebe ahụ, ịnwere ike ịgbakwunye njikọ omenala. N'ebe a, ị nwedịrị ike ịtọ ederede arịlịka na isiokwu kachasị amasị gị ka ị na-agbakwunye URL ọhụrụ gị na profaịlụ Google gị.
Kwuo ebe nrụọrụ weebụ gị na Wikipedia. Nke ahụ ziri ezi, m na-atụgharị uche na Wikipedia. Nwere ike izipu ozi ịkpọasị gị na nick@i-dont-care.com. Ebumnuche gị ebe a bụ ịkọwa otu isi na weebụsaịtị gị (edemede blog ma ọ bụ ụfọdụ ozi ozi) na isiokwu dị mkpa na Wikipedia. Enwere nka na nka. Nke a bụ ebumnuche: ka edemede gị dịrị ndụ ma ọ dịkarịa ala awa 72 tupu mmadụ ehichapụ ya na Wikipedia. Iji mezuo nke a, chọọ edemede na-ewu ewu. Ọ bụrụ na isiokwu ahụ na-enweta ọtụtụ ndezi kwa ụbọchị, ọ ga-abụ na mgbakwunye gị ga-ehichapụ ngwa ngwa tupu bọọlụ Google nwere ohere ịchọta ya. Mana, ọ bụrụ n'ịchọta otu edemede na - anata ndezi ihe ugboro ugboro kwa ọnwa, nke ahụ bụ tiketi ọla edo gị. Tinye ọgụgụ isi na mkpa (ee, ọbụlagodi agụmakwụkwọ na eziokwu) ahịrịokwu ọhụrụ ma gbakwunye a CITE_WEB ntụaka na njedebe. Emela obi ike site na itinye ngalaba ma ọ bụ paragraf ọhụrụ ọhụụ. Ebumnuche gị bụ ka ndị bọọ hụrụ gị, mana ụmụ mmadụ anaghị achọpụta.
Kwusaa akụkọ Google Knol. Ozugbo Google matara na Wikipedia bụ ihe ama ama, ha gbalịrị ịsọ mpi na ya. Google Knol (www.google.com/knol) dị obere agụmakwụkwọ ma ọ nweghị usoro nche maka ihichapụ isiokwu nwere mmasị onwe onye. O doro anya na ị ga - ekwerịrị ka Knol dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Nke a pụtara: ọ ga - aka mma. Ebipụtala ihe ga-adị ndụ ma gosipụta aha gị na aha gị maka ndụ. Dee ederede dị mkpirikpi, dị mkpa dị ka ntinye blog ma jikọta ya na URL ọhụrụ bipụtara gị. Dị ka ihe ọ bụla, gụnyere isiokwu ndị dị na aha Knol a na ederede arịlịka gị dịkwa mma.
Kwusaanụ vidiyo Youtube. Ọnwa ole na ole gara aga, m bipụtara otu isiokwu na-akọwa otu esi enweta njikọ ihe ọ juiceụ juiceụ si Youtube. Na-ekwughachi ọdịnaya ahụ ebe a, naanị m ga-agwa gị ka ị soro ntuziaka Ebe a na nzọụkwụ 8 gị ga-ezu.
Ihe niile dị na ya, mgbe m malitere webusaiti enwere m ọtụtụ oge m ga - arụ tupu nkeji iri atọ. Ọ bụrụ na m mee usoro asatọ a, enwere m ike ịtụkwasị obi na saịtị m ga-apụta na ọchụchọ Google na ụbọchị, ọ bụrụ na ọ bụghị awa. Kedu? Maka na enyela m Google ohere niile ịchọpụta URL ọhụrụ ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọpụtala usoro ọ bụla ọzọ ị na - eji “alchemy” biko enwerela onwe gị ịkekọrịta na ihe ndị a.
Tags: nsonaazụ azụmahịadere ngwaKupọns ekwentịrobbins nke sarahSlider
Achọrọ m ikele gị maka ịme ọmarịcha ọrụ nick.
Akwa ide ihe, Nick. Anọ m na-ejuputa imejuju mkpokọta nke m, isi okwu, isi okwu, na ihe ndị ọzọ metụtara azụmahịa anyị. Ọ bụghị ihe m chọrọ ka ihe niile yie ka ogwugwu, mana ọ bụ mbido, nwekwa mmetụta. Echere m na ọ bụ gị jụrụ m otu oge, “gịnị na - egbochi gị ịmalite?” azaghachiri m, sị, "ọ dịghị ihe, aga m amalite n'izu na-abịa." Ihe ị zara, “Mba. Gịnị na-egbochi gị ịmalite, TAA? ”
Jun 29, 2011 na 1:26 AM
Nke ahụ dị ka ihe m ga-ekwu 😉
You na-ejide apụ na-edo onwe ha n'okpuru maka iri ari ruo mgbe i nwere gi website oyiri zuru ezu isiokwu stuffed… er… I mean “kachasị”?
Jun 29, 2011 na 12:51 AM
Ezi ederede juputara na ufodu ihe omuma atu siri ike, ma obu ihe ijuanya abuo; Ibe Twitter na Facebook. Ebe ọ bụ na Google na-akwụ ụgwọ maka ịnweta iyi Twitter, akaụntụ nwere ezigbo ikike ịkekọrịta njikọ yana ikekwe mmadụ ole na ole na-edegharị ya maka ezigbo ihe ga-eme ka Google nyochaa. Ọ bụrụgodi na esoghi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji hụ na ndị na-eso ụzọ agaghị enwe mmetụta ọ bụla, RSS na-enye ya n’ime akaụntụ freindfeed.
N'otu aka ahụ, ibe Facebook, ọ bụghị profaịlụ, ga-agbakwa ngwa ngwa. Maka ezi ihe tweet njikọ njikọ na ibe Facebook, na Facebook biputere njikọ na ọnọdụ Twitter. Ihe mere m ji akwado ihe ndị a bụ n'ihi na ọtụtụ mmadụ enweworị otu ma ọ bụ ntọala abụọ.
Nke a adịghị emegiderịta onwe gị na ihe ị na-eme n'ezie, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ọzọ nke rụụrụ m ọrụ nke ọma. Kedu ụzọ ọ bụla, itinye njikọ ebe Google na-agagharị mgbe niile ka ọnụọgụ ọnụọgụ na ọnụọgụ ego dị ala na ngalaba ọhụrụ ma ọ bụ saịtị edegharị ga-eme ngwa ngwa ngwa ngwa ma bụrụ ezigbo echiche.
Jun 29, 2011 na 1:24 AM
Kevin, ị kwuru eziokwu. Ha abụọ kwesịrị ịnọ ebe ahụ. Nke a bụ ihe mere na ha emeghị ka m "alchemy" Ntụziaka:
- Site na twitter, ihe niile bụ na ịkwesịrị ịnwe akaụntụ klout iji tọọ ya. Ọ bụrụ n’ịmepụta akaụntụ twitter ọhụrụ, ekwenyesiri m ike na nke ahụ abachaghị uru maka inweta uche nke crawler.
- Site na Facebook, nsogbu bụ na ibe na-ewe obere oge iji mee nke ọma, na ịme nke ọma nwere ike ịbụ ihe ọghọm karịa mma.
Ọ bụrụ na ị nwere akụ, ezi echiche ọzọ nke m na - emekarị ma enweghị m ike ịkọwa onye ọ bụla bụ itinye njikọ na weebụsaịtị ọhụrụ gị site na ngalaba ikike dị elu nke ị nwere. N'ezie, ọtụtụ ndị enwebeghị nke ha, yabụ, ewezugara m nke ahụ.
Daalụ maka itinye ihe ndị a.
Jun 29, 2011 na 2:56 AM
Daalụ Nick maka nnukwu echiche ndị a… M ga-enyefe ndị ahịa m. Ọ na-emetụ m ma ọ bụrụ na m gbanwee nke a na blọọgụ m na otuto zuru oke nye gị?
Achọghị m ịma. Nwere ike ịkọwapụta ma ọ bụ sụgharịgharịa akụkụ ya ka ị ghara ị nweta dinged maka ọdịnaya abụọ.
Jun 29, 2011 na 5:37 AM
Nick echiche dị ukwuu. Nke a bụ usoro siri ike. Echeghị m banyere Wikipedia ma ọ bụ Knol, mana nke ahụ bụ n'ihi isi na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Aga m echeta nke ahụ n’ọdịnihu.
Rajpal Singh kwuru
Youtube echiche dị mma karịa wikepedia ……… ..
Agaghị m eme otu na-enweghị nke ọzọ. Google bụ ihe a na-ejighị n'aka, na Wikipedia na-abanyekarị.
Nov 24, 2011 na 3:32 PM
Naanị m na-etinye njikọ na Blog m, na obere ụbọchị m ga-enweta ya. Mfe.
ezigbo ndụmọdụ ekele